Asidra amino - nahoana ary nahoana? - Gazety "System ovy"
Hatramin'ny nahitana ny rafitra phytohormonal ho an'ny fanaraha-maso ny fizotran'ny physiologique ao amin'ny zavamaniry iray, dia tsy nijanona ny fikarohana ireo akora mety hisy fiantraikany amin'ny fizotran'ny zavamaniry amin'ny lalana ilaina amin'ny olona iray. Ahitana asidra amine ireo akora ireo.
Ny asidra amino dia fitambarana azota organika izay mpandray anjara mavitrika indrindra amin'ny lafiny rehetra amin'ny metabolisma zavamaniry. Amin'izao fotoana izao, 20 fototra (na proteinogenic) asidra amine no fantatra izay tafiditra ao amin'ny synthesis ny proteinina ao amin'ny zavamananaina velona, ​​ary mihoatra ny 500 asidra amine manokana hita ao amin'ny tsirairay molekiola proteinina. Araka ny fandrindrana azy ireo, ny asidra amine dia mizara ho karazany roa: endrika D sy L, ary ny zavamaniry dia afaka mampifanaraka sy mampiasa indrindra ny asidra amine L amin'ny dingan'ny metabolisma.
Ny anjara asan'ny physiologique amin'ny zavamaniry
Ny asidra amine proteinogenika rehetra dia toy ny singa fanorenana amin'ny fananganana polypeptides, ary koa mandray anjara amin'ny fanehoan-kevitra manokana amin'ny metabolisma zavamaniry. Ny anjara andraikitry ny asidra amino dia ny mamindra ny fizotran'ny biochemika amin'ny ambaratonga vaovao miaraka amin'ny tahan'ny fanehoan-kevitra vaovao sy ny famatsiana angovo mahasoa kokoa. Ny fiantraika mivantana amin'ny zavamaniry dia ahitana modely amin'ny fitrandrahana azota sy ny assimilation. Ny tena zava-dehibe dia ny asan'ny asidra amine ho toy ny mpialoha lalana, activators, na singa ara-drafitra amin'ny hormones fototra. Karazan-javatra maro isan-karazany tafiditra amin'ny fanehoan-kevitry ny fiarovana ny zavamaniry dia voaforona mandritra ny metabolisma faharoa amin'ny asidra amine. Maro amin'ireo fitambarana ireo no fototry ny fiarovana ny zavamaniry, ny hafa dia novokarina ho setrin'ny abiotika sy biotika manokana.
Ny zavamaniry dia mamorona asidra amino amin'ny alàlan'ny fizotry ny biochemika sarotra avy amin'ny nitrate sy azota ammonium. Koa satria lafo be ny fizotran'ny synthesis, dia mahasoa kokoa ho an'ny zavamaniry ny maka asidra amino maimaim-poana avy amin'ny tontolo ivelany. Amin'ny ankapobeny, ny asidra amine dia tonga amin'ny alàlan'ny rafitra faka avy amin'ny rhizosphere, na izany aza, amin'ny fambolena dia lasa malaza ny fampiasana ny fanomanana asidra amine amin'ny alàlan'ny famahanana foliar.
Ny fiomanana mifototra amin'ny asidra amino dia novokarin'ny synthesis simika sy mikrobiolojika, na vokatry ny hydrolysis proteinina. Ao amin'ny dingan'ny hydrolysis dia misy karazana asidra amino fototra sy akora fanampiny maro hafa azo. Ny proteinina avy amin'ny biby sy legioma dia ampiasaina ho akora. Nandritra ny hydrolysis ny akora biby, ankoatry ny asidra amine, vokatra ballast maro no miforona, miaraka amin'izay koa, ny hydrolysis ny akora fototra dia tsy manana olana toy izany.
Avy amin'ny fomba fijery agronomika, ny fampiasana ny fiomanana amino asidra, ankoatry ny famporisihana ny fitomboana amin'ny ankapobeny, dia manan-danja rehefa iharan'ny adin-tsaina isan-karazany ny zavamaniry. Ireo dia mety ho abiotika (mari-pana ambany sy avo, tsy fahampian'ny hamandoana, hypoxia, salinity), biotic (fipoiran'ny pathogens sy bibikely) ary adin-tsaina anthropogenic (phytotoxicity ny pestisida, may noho ny fampiasana tsy mety ny herbicides, sns.). Amin'ity tranga ity, ny asidra amine miasa toy ny immunomodulators ny zavamaniry sy ny mpandray anjara mivantana amin'ny fiarovana rehetra ny metabolism. Ny asidra amino exogenous izay miditra amin'ny zavamaniry amin'ny alàlan'ny fanodinana ravina dia tafiditra avy hatrany amin'ny fizotry ny biochemika. Ao anatin'ny toe-javatra mampiady saina, izany dia mamela ny zavamaniry mitahiry loharanon-kery lehibe ho an'ny synthesis voalohany amin'ireo asidra amine ireo, ary mizara indray izany angovo izany amin'ny mekanika miady amin'ny adin-tsaina.
Bion Amino dia hydralizate avy amin'ny zavamaniry, izay ahitana andiana asidra amine L-form fototra 20, polypeptides ary oligosaccharides. Ny endri-javatra manan-danja amin'ny zava-mahadomelina dia ny peptide RHPP, izay mitana ny anjara asan'ny mpanentana ny fitomboan'ny rafitra faka. Ao amin'ny ovy, ny Bion Amino dia ampiasaina ho toy ny famporisihana ny fitomboana hatrany am-piandohan'ny vanim-potoanan'ny fitomboana.
Amin'izao fotoana izao, ny mpamboly dia manana fahafahana hitarika ny fiotazana ovy ho avy na dia alohan'ny fambolena aza. Ny fampiasana stimulant isan-karazany dia ahafahanao "mandrisika" ny hafainganam-pandehan'ny fitomboan'ny zavamaniry. Fanodinana ny tuber Bion Amino amin'ny fatrany 0,1-0,3 l / t, dia mamorona tahiry asidra amino maimaim-poana amin'ny akoran'ny tuber. Ny dobo misy asidra amine misy, tsy misy fandaniana angovo ho an'ny synthesis azy, dia manome fitantanana angovo mahomby kokoa amin'ny zana-kazo, mamindra ny hetsika fitomboana amin'ny ambaratonga vaovao. Ny asidra amino dia manatsara ny metabolisma voalohany amin'ny zavamaniry mitsimoka, manatsara ny valin-kafatra miaro sy mampifanaraka ny ovy amin'ny fanentanana anatiny sy ivelany. Ary ny fisian'ny peptide fitomboana RHPP dia hiantoka ny fananganana rafitra faka matanjaka amin'ny dingana voalohan'ny fitomboana.
Toy ny fanodinana taratasy Bion Amino azo ampiharina mandritra ny fitomboan'ny ovy manontolo amin'ny tahan'ny fanjifana 1,0 - 2,0 l / ha. Ity teknika ity dia hamporisika ny haavon'ny metabolisma amin'ny ankapobeny, ny fizotry ny biochemika fototra: ny respiration, ny photosynthesis, ny metabolisma azota sy ny kôbhydrate, ny synthesis ny kanto organika isan-karazany sy ny phytohormones. Ny fampiasana asidra amino mandritra ny vanim-potoana izay iharan'ny adin-tsaina isan-karazany ny zavamaniry dia hanome ny synthesis ny fitambarana maro tafiditra amin'ny fihetsiky ny fiarovana ny zavamaniry. Ny asidra amino maimaim-poana avy any ivelany dia ho mpialoha lalana ny kapoaky ny fiarovana faharoa, ho molekiola famantarana amin'ny fampahavitrihana ny fototarazo tompon'andraikitra amin'ny fihetsiky ny fiarovana, ary koa hampavitrika ny dingan'ny famerenana amin'ny laoniny ny asan'ny zavamaniry iray.
Ny zavamaniry dia afaka miatrika tsy miankina amin'ny famerana ny tontolo iainana, raha manao sorona ny tondro agronomika, indrindra ny famokarana. Ny paikadin'ny fampifanarahana ny metabolisman'ny olona iray amin'ny toe-javatra mampiady saina dia ahitana ny fanangonana asidra amino isan-karazany. Ary noho izany, ny iray amin'ireo fepetra mahomby indrindra amin'ny fampitomboana ny fahafahan'ny zavamaniry ao amin'ny agroecosystem mandritra ny vanim-potoanan'ny fitomboana dia ny fampiasana asidra amino exogenous ho loharanon'ny substrate mora azo ho an'ny biochemistry manontolo amin'ny zavamaniry.
350059, faritra Krasnodar, Krasnodar, st. Melangevaya 10, birao 208
Tel: 8 (861) 298-55-55 / 8 (800) 301 77 27
Bebe kokoa momba ny zava-mahadomelina BION Amino
Tags: amino acidsBion
Tsy misy ny fampahalalana
Ao amin'ny faritra Novgorod, efa ho 3 taonina ny ovy ary masera 300 mahery no nigoba azy
Mikasika ny sehatry ny fararano volamena 2017, ny faritra sy ny tantsaha dia nanamafy ny fahalianany amin'ny fampandrosoana ny fiantohana ara-pambolena